Sawirka dibedda, Sawirka Beeraha Casriga ah - Piedra
Piedra (Xiamen) Sawirka Sawirka Co., Ltd.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. ku takhasusay sameynta farshaxannada iyo taalada, sida farshaxan bir ah, taalada naxaas ah, sawir gacmeedka, farshaxanka fiberglass, iwm. Kuwaas farshaxanada naxaasta ah iyo farshaxanka birta ah waxaa loo isticmaali karaa farshaxanno jardiino, taallo waaweyn oo bannaanka ah, qurxinta gidaarka birta, qurxinta daaradda, iwm.
Waxaan leenahay koox xirfadlayaal ah: naqshadeeyayaal hibo leh / farshaxanno 3D ah, shaqaale farsamo, iibis aad u fiican, kormeerayaasha QC kormeerayaal, koox iib iib ah oo xoog leh, kuwaas oo wax badan ku biiriya farshaxannadeena tayada sare leh. Naqshadeynta boqoshaada ayaa ka caawisa macmiilkeena USA inuu helo qiimaha 2aad ee bandhig faneed caan ah oo ku yaal Mareykanka, macmiilka Mareykanka wuxuu hadda yahay macmiilkayaga muddada dheer iskaashiga, wuxuu naga dhigay dhowr amarro sanadkii.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. wuxuu ku takhasusay sameynta farshaxanno iyo taallooyin, sida farshaxan bir ah, taallo naxaas ah, farshaxan gargaar, farshaxanno marooji, iwm. ..
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD oo ah shirkad farshaxan leh oo leh naqshadeeyayaal iyo warshadheena, oo leh khibrado aad u tiro badan oo ku xardhan farshaxannada birta, sanamyada naxaas ah, farshaxannada muraayadaha indhaha. Waxaan had iyo jeer u fidinaa alaab tayo wanaagsan, kontarool tayo sare leh, adeeg fiican ka dib iibka macaamiisha. Qanacsanaantaadu waa dhiirrigelintayada si aan u abuurno farshaxanno aan la rumaysan karin oo cajaa'ib leh.
Waad ku mahadsantahay farshaxankii ugu weynaa ee aad noo sameysay sannadihiias. Naqshadyada birta birta ah waa kuwa runtii la yaab leh waxayna soo jiiteen dalxiisayaal badan oo ku sugnaa beerta golf.
Sawirka Sawirka Abstract Mirror
Sawirka weyn ee loo yaqaan 'Huge Mirror Sculpture' ayaa loo qaabeeyey qaab aan la taaban karin, oo u eg likaha aan la taaban karin. Cabirku waa weyn yahay oo qiyaastii waa 2m oo ku habboon in la dhigo gudaha sida farshaxanka qurxinta qurxinta gudaha. Sawirada la farsameeyay si fiican ayaa loo keydin karaa dhibna kuma aha in la haysto in ka badan 50-80 sano. Sidaa darteed haddii aad jeceshahay farshaxanka farshaxan-gacmeedka sidan oo kale ah, fadlan isla markiiba nala soo xiriir. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa qiimo tartan ah tixraacaaga. Sheegashada Magaca Magaca Sawirka: Abstrac ...
Ma ku soo jiidatay Ubax Fidsan ee birta jilicsan? Naqshadeynta ayaa ah mid macquul ah oo cajiib ah Waxaan u maleynayaa in farshaxan ubax bir ah lagu dhejin karo beerta ama deedka sida farshaxanka qurxinta farshaxanka. Sawir gacmeedkan weyn ee birta ah waa mid ka mid ah farshaxankii aan ugu jeclaa farshaxanka dhirta oo culus. Waxaan u habeyn karnaa farshaxan kasta sida shuruudahaaga. Websaydhkeena waxay leeyihiin badeecado noocyo kala duwan ah sidaas darteed waad ka hubin kartaa tixraac ahaan. Faahfaahinta Sawirka Sawirka Sawirka qurxinta jardiinooyinka farshaxanka casriga ah Dhererka Sawirka loo qaabeeyey MAYA ...
Sawiro Dibadeed oo Waaweyn Oo Qalabka Birta Aan Fidnayn ...
Ma waxaad ka argagtay boqoshadan weyn ee birta birta ah ee birta leh Waxaa lagu rakibay aagga cawska, USA. Sawir gacmeedkan likaha ayaa kaalinta labaad ka galay hal bandhig caan ah oo farshaxanka Mareykanka ah oo ka dhex muuqda 50 farshaxan.Waxaad ka arki kartaa naftaada dusha sare, maxaa yeelay waxaa laga sameeyaa muraayad dusha sare leh oo dhalaalaya oo sarreeya alxanka iyo xardho. Waxaa loogu talagalay qaab muuqaalka boqoshaada, waa mid aad u cajiib badan markaad aragto halkaas. Macaamiisheenna ajaanibka ahna waxay ku qanacsan yihiin taalladan weyn ee bannaanka ah. Maxaad ugu dooran weyday beertaada ama deyrkaaga ...
Fadlan nala soo xiriir waxaanan kula soo xiriiri doonnaa 24 saac gudahood.
Alaabada soo jeedi
Sawirka dibedda ee bandhigga
Naqshadeynta bannaanka waa runti aad u weyn oo loo hayn karo sida qurxinta bannaanka, sida qurxinta labajibbaaran, qurxinta farshaxanka iyo wixii la mid ah. Waxaa loogu talagalay qaab diirkeed, waxaa lagu miiray saameyn muraayad iyo midab dahab ah. Oo way ka duwan tahay midabka dahabiga ah ee caadiga ah, kaas oo ereygan rootiisu ay la midab tahay midabka dahabka ah si aad u aragto milicsiga hooska halkan. Laakiin midabka dahabka ah ee caadiga ah ma arki karaan hoos. Haddii farshaxanno bir ah oo bir ah ay xiiseynayaan adiga, fadlan xor ayaad u tahay inaad noogu soo dirto iibka1 @ b ...
Waa maxay farshaxanka farshaxanka birta ah
Farshaxanka farshaxanka biraha wuxuu ka ciyaaraa door aan la beddeli karin naqshadeynta booska iyo qurxinta. Farshaxan bir ah oo qurxin ayaa lagu rakibi karaa banaanka dadweynaha ama meelaha gudaha ah, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa goobta dhaqanka. Waxaan ognahay in farshaxannada birta ay ku jiraan noocyada qaarkood sida farshaxanka birta birta ah, naxaasta s ...
Maxaa naxaas loogu adeegsadaa farshaxanimada
Farshaxanka naxaasta ahi wuxuu leeyahay waqti dheer oo la hayn karo lana xafidi karo si ka wanaagsan boqollaal sano. Marka loo barbardhigo farshaxanno kale, farshaxan naxaas ah ayaa sidoo kale leh taariikh dheer, maahan? Waxaan ogsoonahay farshaxanka naxaasta ah ee naxaasta lagu ridi karo qaab ahaan, xayawaan iwm.
Ma loo isticmaali karaa birta korantada 'corten steel'?
Birta Corten ama Cimilada Hawada waa nooc gaar ah oo silsilado bir ah oo hooseeya oo u dhexeeya birta birta ah iyo birta kaarboon caadiga ah. Waxay leedahay iska caabbinta hawo-mareenka iyo muuqaalka daaha ka roon kuwa kaarboon-garonka caadiga ah, qiimahana wuxuu ka dhaqaale badan yahay birta-birta. Saxanka corten steel waa ...